पार्टी एकता, जनयुद्ध, मदन भण्डारी र आगामी रणनीति | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पार्टी एकता, जनयुद्ध, मदन भण्डारी र आगामी रणनीति
फागुन २ गते, २०७५ - १६:५४
एउटा धारा शान्तिपूर्ण रूपले संसदीय प्रक्रियाको माध्यमबाट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने धाराको रूपमा स्थापित भयो भने अर्को धारा जनयुद्धको रूपमा, सशस्त्र विद्रोहको रूपमा अगाडि बढ्यो। लक्ष्य कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने थियो। नेपालका सबै उत्पीडित समुदायका हक, अधिकारको लडाइँ अगाडि बढाउने थियो। केही काल यी दुई धाराले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने र आफूलाई देशको एक मात्र आधिकारिक, प्रामाणिक एवं वैधानिक धाराको रूपमा स्थापना गर्ने प्रयासहरू नगरेका होइनन्।
सारा संसारले हामीतिर हेरेको छ, साच्चै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य कस्तो होला त? यो पार्टी एकताले जसरी नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गरेको छ यसले अब निरन्तर प्रगतिको दिशामा जान सक्ला कि नसक्ला? भनेर सबैले हेरेको स्थिति छ। त्यसकारण यसलाई सफल पार्ने दायित्व एउटा दुईटा नेता विशेषको मात्रै होइन, एउटा दुईटा समूह विशेषको मात्रै होइन। हामी सबै परिवर्तन, क्रान्ति, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैको जिम्मेदारी हो। हामी सबै एकठाउँमा केन्द्रित भयौँ र गोलबन्द भयौँ भने त्यो सपना हामी छिट्टै र तुलनात्मक रूपले सहज ढंगले पूरा गर्न सक्छौँ। प्रतिक्रियावादी चाहन्छन् कि हामी विभाजित बनौँ। यो जो भएको छ यो पनि अगाडि राम्रोसँग नजाओस् र थप गोलबन्द पनि नहुन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। त्यसैले हामी प्रतिक्रियावादीलाई खुसी पार्ने बाटो जान सक्दैनौँ। माओत्से तुङले पटकपटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ‘प्रतिक्रियावादी जे मा खुसी हुन्छन्, जुन कुरालाई राम्रो भन्छन् त्यो हाम्रोलागि नराम्रो हुन्छ। उनीहरूले जे लाई नराम्रो भन्छन् त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ।’ यो भनाइ बडो मार्मिक छ। हामी सबैले अहिले प्रतिक्रियावादीले खोजेको के छ त? पार्टी एकता राम्रोसँग अगाडि नबढोस्, विभाजित होस्, कम्युनिस्टहरूको प्रभाव घटोस्, कम्युनिस्टको नेतृत्वमा विकास र समृद्धि नहोस् भन्ने खोजेका छन्। तपाईं-हामी साँच्चै कम्युनिस्ट हौँ भने प्रतिक्रियावादीले खोजेको काममा त लाग्नै सक्दैनौ, लाग्नै हुँदैन। प्रतिक्रियावादीलाई कमजोर पार्नका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बडो सरल र बुझिने सिद्धान्त हो। यो बुझ्नलाई धेरै ठेली पढ्न पर्दैन। सजिलै बुझिन्छ र यसलाई मजबुद बनाउनेतिर जान आवश्यक छ। साथसाथै नेपालको राष्ट्रिय स्तन्त्रताको दृष्टिकोणले हाम्रो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई निरन्तर अगाडि बढाउने दृष्टिकोणले देशमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ।
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘जनआनदोलन र जनयुद्धका शहीदहरूको सम्मान’मा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
फागुन २ गते, २०७५ - १६:५४ मा प्रकाशित